ရင်သားကင်ဆာအား မည်သို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်း။
EN - EnglishKH - CambodiaVN - VietnamZH - 中文(简体)AR - العربية
ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်Feb 2016ရင်သားကင်ဆာအား မည်သို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်နည်း။
փետրվարի 19, 2016 Breast-CancerCancer-ScreeningMammogramWomen-Healthရင်သားဓါတ်မှန်
ရင်သားကင်ဆာအား အစောပိုင်းတွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည် အရေးကြီးပြီး၊ ရင်သားဓါတ်မှန် (Mammogram) ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် ရင်သားဓါတ်မှန်မစစ်ဆေးခဲ့ဖူးလျှင်၊ ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်သည်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
ရင်သားကင်ဆာသည် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရင်သားကင်ဆာအစောပိုင်းအဆင့်ကို တွေ့ရှိပြီး သင့်တော်သော ကုသမှုခံယူခြင်းအားဖြင့် အောင်မြင်မှုနှုန်း
သိသာစွာမြင့်လာနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားရောဂါများကဲ့သို့ပင် ရင်သားကင်ဆာသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ကုသရန်လွယ်ကူပြီး၊ အစောပိုင်းတွေ့ရှိပါက အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်ပါသည်။
ရင်သားဓါတ်မှန် (Mammograms) သည် ရင်သားကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ရင်သားဓါတ်မှန် (Mammograms) သည် ဓါတ်မှန်ပုံရိပ်မှတဆင့် ပုံမမှန်ကြီးထွားနေသော တစ်သျှူးများကို စမ်းသပ်နိုင်ပါသည်။စမ်းသပ်သိရှိနိုင်သော ပုံမမှန်ခြင်းများတွင် ရင်သားတစ်သျှူးအတွင်း သေးငယ်သော ကယ်လ်ဆီယမ်များစုနေခြင်း၊ အရည်အိပ်များနှင့် အကျိတ်များ ပါဝင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ရင်သားစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း (BSE) အားဖြင့်မသိရှိနိုင်ပါ။ ရင်သားဓါတ်မှန်သည် သင့်တွင်ရင်သားကင်ဆာရှိမရှိ စစ်ဆေးနိုင်သော ပထမအဆင့် စမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါသည်။
ရင်သားစစ်ဆေးသော ဓါတ်မှန် (Screening mammograms)နှင့် ရောဂါသတ်မှတ်သော ရင်သားဓါတ်မှန် (Diagnostic mammograms) ဟူ၍ရှိပါသည်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုတွင် အချိန်ကြာမြင့်မှုမရှိပါ
ဆိုသော် ခံစားသိရှိနိုင်သောလက္ခဏာတစုံတရာမျှမပြသော အမျိုးသမီးများတွင် ဓါတ်မှန်ပုံရိပ်အနည်းငယ်မျှ
သာလိုအပ်ပါသည်။ အခြားတနည်းဆိုရလျှင်၊ ရောဂါသတ်မှတ်သော ရင်သားဓါတ်မှန် (Diagnostic mammograms)သည် ကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားအမျိုးမျိူးမှ အနုစိပ်ကျသော ဓါတ်မှန်ပုံရိပ်များ ထုတ်
ပေးပြီး ဆရာဝန်အတွက် ရောဂါအတိအကျ ရှာဖွေ သတ်မှတ်နိ်ုင်စေရန် အထောက်အကူပေးပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရင်သားနာကျင်ခြင်း၊ အလုံးတွေ့ရှိခြင်း (သို့) အလုံးကြီးထွားလာခြင်းကို စမ်းသပ်မိပါက ရောဂါသတ်မှတ်သော ရင်သားဓါတ်မှန် (Diagnostic mammograms) ဖြင့် စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပါသည်။
ရင်သားဓါတ်မှန်စစ်ဆေးရသောနေ့တွင် သင်၏ ရောဂါနောက်ကြောင်းရာဇဝင်အား ဖောင်ပုံစံ စာရွက်တွင် ဖြည့်စွက်ရန်နှင့်၊ အကယ်၍ ပုံမှန်မဟုတ်သော လက္ခဏာများရှိနေပါက အသိပေးရေးချပေး
ထိုနောက်ကိုယ်၌ပါလာသောလက်ဝတ်ရတနာများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းရှိအဝတ်အစားများဖယ်ရှား ရန်လိုအပ်ပြီး သင့်အားသီးသန့်လူနာခန်းတစ်ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပါမည်။
၄င်းအပြင် အဝတ်စတစ်ခုပေးပါမည်။ သူနာပြုမှ သင့်အားအထူးရင်သားဓါတ်မှန်စက်ရှေ့သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီး
ရင်သားတစ်ဖက်အား အရပ်အမောင်းအမြင့်အတိုင်း အလျှားလိုက်ချိန်ညှိပေးပါသည်။ ဒုတိယအနေဖြင့် စက်သည် ဓါတ်မှန်ပုံရိပ်မရိုက်ခင်တွင် ရင်သားအပေါ်မှ အောက်သို့ဖိပြီး အထူအပါးညီအောင်နှင့် ပုံရိပ်ငြိမ်
စစ်ဆေးနေစဉ်အတောတွင်း (စက္က္ကန့်အနည်းမျှသာ) သင်သည် အသက်အောင့်၍ မလှုပ်ရှားပဲရပ်နေရန်လိုအပ်
ပါသည်။ ဖိအားကြောင့် မသက်မသာခံစားရနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍နာကျင်မှုခံစားခဲ့ရပါက စက်ကိုထိန်းညှိ ပေးရန် သူနာပြုအားအကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
ရင်သားဓါတ်မှန်ရိုက်ပြီးမကြာခင်တွင် ဆရာဝန်မှ ပုံမှန်မဟုတ်သောမည်သည့် လက္ခဏာကိုမဆို သင့်အားပြောပြ
နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထပ်ပေါင်းစစ်ဆေးမှုများ၊ ပုံမှန်ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ (သို့) ကုသမှုများ လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်မှ
သင်၏ဆရာဝန်နှင့် အချိန်ယူဆွေးနွေးပြီး၊ သင့်ရင်သားနှင့်ပတ်သက်သောပုံမှန်မဟုတ်သည့် လက္ခဏာများနှင့် မည်သည့်အရာသည်ပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့် သင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့် သက်တောင့်သက်သာဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်သော အမျိုးသမီးအများစုသည် သတိပေးလက္ခဏာများ ကို လျစ်လျူရူခြင်းနည်းပြီး၊ သံသယရှိစရာ မည်သည့်ပြဿနာမျိုးကိုမဆို သူတို့၏ဆရာဝန်သို့ ဆက်သွယ် တိုင်ပင်မေးမြန်းလေ့ရှိတတ်ပါသည်။
အသက် ၄၀ ဝန်းကျင်ရှိအမျိုးသမီးများအား ပထမဆုံး အခြေခံစစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် ၁ နှစ် (သို့)
၂ နှစ်တစ်ကြိမ် ရင်သားဓါတ်မှန်အချိန်ယူ စစ်ဆေးရန်အကြံပြုပါသည်။ သို့သော် ရင်သားကင်ဆာ
ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်သောအမျိုးသမီးများမှာ (ဥပမာ) ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဖူးသော မိသားစု ရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ ရင်သားတဖက် (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အလုံးအကျိတ်ရှိခြင်း စသောသူများသည်
ရင်သားဓါတ်မှန် အမြန်ဆုံးစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ရင်သားဓါတ်မှန် မည်သို့ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သင့်သည်ကို ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုက်ပါ။
Dr. Wanchalerm Nunvitipong, ရင်သားခွဲစိပ်အထူးကု၊ ခွဲစိပ်ဌာန၊ ဘမ်ရွန်ဂရက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံ။
ရင်သားကင်ဆာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုသိရှိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ရင်သားဌာနမှ ရင်သားကင်ဆာအထူးကုနှင့် ရက်ချိန်းရယူလိုပါသည်။ ရက်ချိန်းရယူပါ။
Tel. +66 (0) 2011 2361
Tel. +66 (0) 2011 2365